फ्लेक्स र अपोलो किन विजय हुनेछ Martech Zone
किन फ्लेक्स र अपोलो विजय हुनेछ
पछिल्लो रात मैले केही साथीहरूसँग साँझ बिताए।
पहिलो hours घण्टामा खर्च भयो किनाराहरू ग्राहकको साइटमा काम गर्दै जुन केही क्रस-ब्राउजर क्विर्कहरू थिए। साइट उत्तम, वैधको साथ लेखिएको थियो CSS। यद्यपि, फाईलफक्स २ एक पीसीमा बुलेट गरिएको मेनू सूचीमा कुरूप पिक्सेल शिफ्ट थियो र इन्टरनेट एक्सप्लोरर on मा, सीएसएस विधि मध्ये कुनै पनि काम गरेन।
फायरफक्स २ (जाँच गर्नुहोस् कि अनौंठो पिक्सेल सिफ्ट जसले यसलाई लगभग इटालिसीज गरिएको देखिन्छ):
यो यस्तो देखिनु पर्छ:
प्रत्येक पटक जब हामीले केहि परीक्षण गर्‍यौं, अर्को ब्राउजर बिच्छेद भयो। हामी ओएसएक्स भर सफारी र फायरफक्स र आईपी IE, आई 6, र फायरफक्सको साथ XP मा परीक्षण गरिरहेका थियौं। मा बिलको विशेषज्ञता CSS र जाभास्क्रिप्टको मेरो प्रेम अन्ततः एक समाधानको लागि नेतृत्व गर्‍यो जसलाई ब्राउजर विशिष्ट ह्याक्सहरू आवश्यक पर्दैन ... तर यो हास्यास्पद (तर रमाईलो) व्यायाम थियो जुन वेब डिजाइनरहरू प्रत्येक दिन पार गर्छन्।
तथ्य यो एप्पल, मोजिला, माइक्रोसफ्ट, र ओपेरा अनुप्रयोगहरू लेख्न असमर्थ छन् जुन एक प्रयोग गर्दछ वेब मानक ती सबैलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु पर्छ। म पूरै बुझ्न सक्दछु यदि प्रत्येक ब्राउजरसँग आफ्नै सुविधाहरू छन् जुन उनीहरूको आफ्नै स्क्रिप्टिंग मार्फत समर्थित गर्न सकिन्छ - तर यो आधारभूत चीज हो।
यो किन एक उत्तम उदाहरण हो अपोलो र फ्लेक्स इन्टरनेट व्यापक एक ठूलो मौका खडा। मैले यस बारेमा केहि दिन अघि लेखेको थिएँ स्क्र्यापब्लग, फ्ल्याक्समा लेखिएको अनुप्रयोग (र छिटो अपोलोमा पोर्ट गरिएको छ)। यदि तपाईंसँग यसलाई हेर्ने मौका छैन भने - जाँच्नुहोस् - यो आश्चर्यजनक को छोटो छैन।
फ्लेक्स अन्तर्गत चल्छ एडोब फ्ल्यास ब्राउजर प्लगइन। यो एक प्लगइन हो कि 99.9% धेरै इन्टरनेट चल्छ (तपाईं प्रत्येक चोटि यूट्यूब भिडियो हेर्दा प्रत्येक पटक चल्दै हुनुहुन्छ)। अपोलो उही इन्जिन प्रयोग गर्दछ तर तपाइँ वास्तवमा ब्राउजरमा सीमित हुनु भन्दा एक अनुप्रयोग विन्डोमा चलाउन अनुमति दिन्छ।
फ्लेक्स भनेको के हो?
बाट एडोब: फ्लेक्स अनुप्रयोग फ्रेमवर्क MXML, एक्शनस्क्रिप्ट 3.0.०, र फ्लेक्स वर्ग पुस्तकालयको समावेश गर्दछ। डेभलपरहरूले MXML प्रयोगात्मक अनुप्रयोग इन्टरफेस एलिमेन्टहरूलाई परिभाषित गर्न र ग्राहक तर्क र प्रक्रियात्मक नियन्त्रणको लागि एक्शनस्क्रिप्ट प्रयोग गर्दछ। विकासकर्ताहरूले MXML र कार्य स्क्रिप्ट स्रोत कोड Adobe फ्लेक्स बिल्डर प्रयोग गरेर लेख्छन्? IDE वा मानक पाठ सम्पादक।
क्रस-ब्राउजर सरल मेनू निर्माण गर्दा हाम्रो निराशालाई दिईए, ब्राउजरहरूमा समर्थित पूरा वेब अनुप्रयोग निर्माण गर्न प्रयास गर्ने कल्पना गर्नुहोस्! अन्तमा, विकासकर्ताहरूले ह्याकहरू वा ब्राउजर विशेष स्क्रिप्टि writeहरू लेख्नु पर्छ समान अनुभव सुनिश्चित गर्न तपाईले आफूलाई कस्तो किसिमको ब्राउजर वा डेस्कटपमा काम गरिरहेको पाउनुभएको छ भन्ने कुराको परवाह नगरी। कुनै क्रस ब्राउजर मुद्दाहरू छैनन् र ब्राउजरको भित्र वा बाहिर चल्न अपोलोमा सजिलैसँग पोर्ट गर्ने अतिरिक्त फाइदा।
चिन्ता नगरिकन यो कसरी प्रत्येक ब्राउजरमा देखिन्छ, त्यहाँ अन्य फाइदाहरू छन्। फ्लेक्सका लागि लेखन गर्छ छैन औपचारिक प्रोग्रामिंग सीप आवश्यक छ। मलाई लाग्छ कि किन धेरै पेशेवर प्रोग्रामरहरू फ्लेक्स वा एडोबको उपयोगमा गिल्ला गर्दछन्। उनीहरूले तपाईलाई दशौं हजारौं डलर खर्च गरे जुन उनीहरूलाई ASP.NET मा सुविधा विकास भयो जुन केहि लाइनहरू लिन्छ। MXML.
यदि तपाईं फ्लेक्स र अपोलोमा राख्न चाहनुहुन्छ भने, मेरो साथी बिलको ब्लगको सदस्यता लिनुहोस्।
नयाँ ब्लगरहरूको लागि पाठक अधिग्रहण रणनीतिहरू
अप्रिल 2, 2007 मा 7: 08 एएम
ठीक डग भने। यदि मार्केटिंग टेक मान्छेहरू प्राप्त गर्दछ, म अधिक विकासकर्ताहरु को लागी उच्च आशा राख्छु 😉
अप्रिल 4, 2007 मा 3: 28 एएम
> यो एक प्लगइन हो जुन 99.9% इन्टरनेट चल्छ
तपाईंले त्यो तथ्याङ्कको लागि आफ्नो स्रोत जाँच गर्न चाहनुहुन्छ ... 🙂
यहाँ छ, अप्रिल 2007 र मसँग अझै फ्ल्यास क्लाइन्ट छैन जुन मेरो Ubuntu x86_64 (AMD64) डेस्कटप वातावरण अन्तर्गत चल्छ।
अप्रिल 4, 2007 मा 9: 55 एएम
स्टीफन - तपाईं सहि हुनुहुन्छ ... यो एक अप्रमाणित तथ्याङ्क हो। वास्तवमा, यो के रूपमा चिनिन्छ स्वाग.
यसको लागि माफ गर्नुहोस्!
अप्रिल 16, 2007 मा 11: 43 एएम
यहाँ फ्ल्याशको प्रवेशको सम्बन्धमा लिङ्क छ - हाल फ्ल्यास प्लेयर 84.3 सँग 9% प्रवेश।
अगस्ट 21, 2007 बेलुका 11:15 बजे
ठीक डग, राम्रो प्रविष्टि स्टीफन भने।
अगस्ट 27, 2007 बेलुका 2:30 बजे
हम्म.. यो प्रविधि साँच्चै रोचक छ। म प्रोग्रामर होइन, तर तपाईले लेख्नुभएजस्तै यसलाई आवश्यक पर्दैन। राम्रो छ, म गएर जाँच गर्छु।
अक्टोबर 22, 2007 बिहान 9:18 बजे
धेरै रोचक लेख, यसको बारेमा सोच्नेछ।